Sidee Loo Dejiyaa Bixinta Sms-ka Twitter-ka? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 535
Isticmaalaha Twitter-ka ayaa leh ikhtiyaar ah u dhig PIN-ka SMS; Ujeedadaas awgeed, waxaad u baahan tahay inaad raacdo nidaamkan: Marka hore, waa inaad hubisaa in qalabkaaga moobiilku uu ku xiran yahay koontadaada Twitter.
Marka xigta, Isticmaaluhu wuxuu ku soo galayaa Xisaabtiisa Twitter-ka ee shabakadda oo wuxuu ku yaal Qaabeynta moobilka; Gali PIN-ka aad rabto, oo ay tahay inuu leeyahay afar xarfood oo xarfo-xaraf ah, oo aad xagga hoose ee bogga, guji Badbaadinta isbeddelka
Haddii Lambarka isticmaalaha, fariin xaqiijin ah ayaa soo muuqan doonta. Haddii Isticmaaluhu u hawlgeliyo PIN lambarkiisa, waa inuu galiyaa ka hor qoraalka Tweet-ka ama amarka SMS-ka ee uu ugu diro lambarkiisa gaaban ee Twitter.
Wax ka beddel ama tirtir PIN-ka barta Twitter-ka
PIN-ku waa lambar aqoonsi shaqsiyeed oo Isticmaaluhu isticmaali karo sug amniga ka socota Koontadaada Twitter. PIN-ka waxaad ku dari kartaa horgale cusbooneysiintaada iyo amarrada moobiilka.
Isticmaalaha, mar shaqeeyay lambarkaaga PIN Xisaabtaada Twitter, waxaad leedahay ikhtiyaarro aad wax kaga beddeli karto ama u tirtiri karto PIN-ka. Dareenkan, waxay u baahan tahay in la aado Qaabeynta qalabka mobilada; mar uun, goobta PIN ayaa ku taal.
Goobta PIN, Isticmaaluhu wuu helayaa Wax ka beddel ama tirtir PIN-kaaga hal mar. Ujeedadaas awgeed, waxaad u baahan tahay inaad u rogto dhinaca hoose ee bogga una gudub ikhtiyaarka Badbaadinta isbeddellada, guji.
KA QAADO MUUQAALO NOLOL OO KU SAABSAN TWITTER
Barta Twitter, Isticmaaluhu wuxuu fursad u leeyahay abuuro Fiidiyowyo Live ah oo aan wadaagno waxa dhacaya waqtiga dhabta ah. Twitter waa meesha ugu fiican ee laga helo macluumaadka mawduuc kasta oo caalami ah.
Isticmaalaha Twitter si uu u abuuro Muuqaal Live ah, waxaad u baahan tahay inaad sameyso waxyaabaha soo socda: Guji Sanduuqa Tweet; Guji Tooska xulashada hoose; toos u tabinta, waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad kaamirada damiso oo aad ka qayb gasho oo kaliya codka, halkan guji makarafoonka.
Marka xigta, Isticmaaluhu wuxuu gujinayaa Transmit Live; awoodo dhammee Muuqaalkaaga Tooska ah Waqti kasta, dhagsii Joojinta bidix ee kore oo xaqiiji xulashadaada menu-ka la soo bandhigay.
U oggolow daawadayaasha inay codsadaan inay ku soo biiraan durdurkeyga Twitter
Isticmaalaha Twitter-ka ayaa leh ikhtiyaar uu ugu oggolaado daawadayaasha inay codsadaan Ku biir durdurkaagaWaxaad u baahan tahay oo keliya inaad u hoggaansanaato nidaamkan: Guji sanduuqa si aad u Tweet; Guji Tooska sanduuqa hoose.
Guji astaanta ku taal geeska midig ee sare si aad ugu fududeyso adeegsadayaasha Daawadeyaal toos ah, Codsi Ku Biirista Gudbinta Isticmaalaha; Guji Baahinta Tooska ah si aad uga bilowdo tabintaada shabakada bulshada ee Twitter.
Marka isticmaale Twitter Codsi Ku Biir u Gudbinta Isticmaalaha, ogeysiis ayaa ka muuqan doona sheekada; dhagsii astaanta si aad ugu darto. Haddii aad go'aansato inaad ka saarto martida, dhagsii X dhinaca midig ee midigta avatar-kooda.
1 Wax ka beddel ama tirtir PIN-ka barta Twitter-ka
2 KA QAADO MUUQAALO NOLOL OO KU SAABSAN TWITTER
3 U oggolow daawadayaasha inay codsadaan inay ku soo biiraan durdurkeyga Twitter